शिघ्र वीर्य स्खलन समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ? | Science InfoTech	शिघ्र वीर्य स्खलन समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
by Science InfoTech	,	August 6, 2016
शिघ्र वीर्य स्खलन
प्राय: सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा छिटो वीर्य स्खलन भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । अहिले आफू तथा आफ्नो यौनजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्य स्खलन भए त्यसलाई छिटो वीर्य स्खलन भएको स्थिति अर्थात् शीघ्र स्खलन मान्न थालिएको छ । योनिमा घर्षण नै गर्न नपाई वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो । कतिपयले सामान्य समयसीमामै वीर्य स्खलन भए पनि चाँडो भएको मान्छन् भने कसैले धेरै समय लागे पनि त्यसलाई सामान्य मान्न सक्छन् । महिलालाई यौन चरमसुख प्राप्त गर्न एकदम धेरै समय लाग्ने अवस्थामा पनि सामान्य समयमै भएको भए पनि पुरुषको वीर्य स्खलन चाँडो भएजस्तो लाग्न सक्छ ।
यसको पक्का कारण यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि शीघ्र स्खलनको मूल कारण मानसिक नै भएको पाइन्छ । कतिपय मानिसमा यौनसम्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हुनसक्छ । आफ्नो यौन जोडीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ता ( performance anxiety) ले समस्यालाई थप चर्काउँछ । विरलै भए पनि केही Psychotropic Drug कतै यस्तो समस्याको कारण त होइन भनेर केलाउन पनि बिर्सनु हुँदैन ।
कतिपय जोडीले उत्तेजित लिङ्ग योनिमा पसाउने र लिङ्गलाई बाहिर–भित्र गर्ने अनि स्खलन भएपछि लिङ्ग झिकेर थपक्क कोल्टे परेर सुत्ने किसिमको यौन सम्पर्क गर्छन् । यस्तो स्थितिमा कतिपय महिलाले यौन आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्तोमा महिलाको सबैभन्दा यौन संवेदनशील अंग भगांकुरको घर्षण नै हुँदैन । त्यसमा पनि शीघ्र स्खलन हुँदा लिङ्ग प्रवेश नै गर्न पाएको हुँदैन वा भए पनि त्यसको समय निकै छोटो हुन्छ, त्यसैले थप समस्या पर्छ । तपाईंकी केटी साथी (गर्ल फ्रेन्ड) ले सन्तुष्टि नपाएको कुरा पनि यसैसँग सम्बन्धित छ ।
धेरैजसोले यौनसम्पर्क राखे पनि वीर्य स्खलन हुनुलाई पुरुषको यौन कार्य सक्षमताका रूपमा लिन्छन् । यसरी शीघ्र स्लखन हुँदा यौन कार्यसम्पादन राम्रोसँग गर्न नसकेको मान्छन् । महिलालाई यौन सुख दिन नसकेको भन्ने मानेर दु:खी मात्र हुने होइन, उनीहरूमा आत्मसम्मानको समेत समस्या देखिन सक्छ । महिलामा पनि शीघ्र स्खलन हुँदा पुरुषले मलाई यौनसन्तुष्टि दिन सक्दैन भन्ने मान्न सक्छन् ।
यस्तो स्थितिमा वीर्य स्खलनमा मात्र केन्द्रित गरेर यौनसम्पर्क राखिन्छ । कार्य सम्पादनको चिन्ता भएको स्थितिमा समस्या अझ चर्कन्छ । यस्तो स्थितिमा लिङ्ग योनिमा पसाउनुभन्दा पहिले गरिने स्पर्श, चुम्बन, सुमसुम्याइ वा पाक्क्रीडाजस्ता क्रियाकलाप पनि कम भएर जान्छन् । यसले गर्दा पुरुषमा मात्र होइन, महिलामा पनि मानसिक तनाव हुन्छ । यसले सम्बन्धको सुमधुरतालाई नै समस्यामा पार्न सक्छ । दुवैले राम्रोसँग कुराकानी गरेर तनावरहित वातावरणमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । हामीलाई थाहै छ, महिलाको सबैभन्दा यौन संवेदनशील अङ्ग भगांकुरबाहिरतिरै हुन्छ र यसको घर्षणका लागि योनिमा लिङ्ग प्रवेशको आवश्यकता पनि पर्दैन । औंला वा अन्य तरिकाले यसको घर्षण गर्दा महिलाले यौन आनन्द प्राप्त गर्न सक्छन् ।
समाधानका लागि के गर्न सकिएला ?
साभार : साप्ताहिक प्रकाशित : असार २३, २०७३
Tags:	fast sperm ejaculation, sperm, वीर्य, वीर्य स्खलन